Booliiska Soomaaliya oo qabtay labo nin oo looga shaki qabo al-Shabaab - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBooliiska Soomaaliya oo qabtay labo nin oo looga shaki qabo al-Shabaab
July 8, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, South-Central 0
Nimanka looga shaki qabo al-Shabaab oo ay ciidamada booliska qabteen. Sawirka: SONNA.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Booliiska Soomaaliya ayaa ku xiray gudaha degmada Yaakhshiid ee Muqdisho labo nin oo looga shaki qabo al-Shabaab, sida uu sheegay sarkaal.
Taliyaha booliiska Yaakhsiid, Maxamed Yuusuf Nuur ayaa u sheegay wakaalada wararka Soomaaliya Sonna in labada nin ee la qabtay ay baastoolado ku qarsadeen dhismaha qudbi masaajid.
“Dadka deegaanka ayaa na siiyay macluumaad ku saabsan kuwaas looga shakisanyahay al-Shabaab kadibna waxaanu howlgal ka samaynay gudaha masaajidka Yaakhshiid waxaana soo saarnay hubka ay qariyeen waana xirnay iyagii, waxaa ku socda baaritaan,” Mr. Maxamed Yuusuf ayaa sidaa u sheegay Sonna.
Maleeshiyada al-Shabaab ayaa gudaha caasimada Muqdisho laga saaray sanadkii 2011-ka, balse wali waxay qaadaysaa weeraro dhiig ku daatay oo ka dhan ah saraakiisha dowlada Soomaaliya, ciidamada AMISOM iyo meelaha ay bulshada isugu timaado, sida huteelada iyo makhaayadaha.